Haleellaa Al Shabaab Yunivarsiitii Garissaa irratti raawwateen laakkofsi barattoota ajjeefamanii 147 gaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Haleellaa Al Shabaab Yunivarsiitii Garissaa irratti raawwateen laakkofsi barattoota ajjeefamanii 147 gaye
Haleellaa Al Shabaab Yunivarsiitii Garissaa irratti raawwateen laakkofsi barattoota ajjeefamanii 147 gaye
Barttoonni 79 madaayuun isaanii beekameera
Rukuttaa Yunivarsiitii Garissaa biyya Keeniyaatti argamu irratti raawwatameen lubbuun barattoota 147 galaafatamuu poolisiin biyyattii ibse. Kanniin madoo ta’an 70 ol ta’uunis beekameera. Kanniin madaa hamaan hubaman gara hosptaala naayroobitti geeffamuun isaanii beekameera.
Haleella kana kan raawwatan hidhattoota garee Al Shabaab 5 ta’uu isaaniitu himama. Hidhattoonni kunniin Kilaashii hidhachuun alatti mudhii isaaniis dhukaatuun marsanii turan. Yeroo humni nagaa biyyattii iggitii sa’aa 12 oliif turetti xumuru latuuf tankaarfii dhumaa fudhatetti, hidhatoonni Al Shabaab afranuu dhooyuudhaan humna naaga biyyattii hanga tokko irra hubaatii xixiqqaa geessuu danda’aniiru. Hidhattoonni kunniin 4 du’anii 1 too’annaa humna nagaa jala ooluun beekameera.
Perezidaantiin biyyattii Uhuruu Keeniyaattaa maatii ijooleefi fira dhaban hundaaf gadda isaa ibsee, shororkeessitoota bayiinsa lubbuu nama hedduutiif sababa ta’an irratti tankaarfii cimaa fudhachuudhaaf dhaadateera.
Rukuttaan amma Keeniyaa irratti raawwatame kuni bara 1998 isa embaasii Ameerikaa irratti raawwatame kan namoonni 203 itti ajjeefamanii asi isa hamaadha jedhama. Ajjeechaa lammiiwwaan Keeniyaa irratti raawwatame kana biyyoonni addunyaa heddu balaaleffataa jiru. Ameerikaan tankaarfiin Al Shabaab fudhate ‘suukkanneessaa’ jechuun balaalefachuu bira ceetee mootummaafi ummata Keeniyaa kan gargaartuufi waan danda’amu cufaan bira kan dhaabbattu ta’uu ibsiteerti. Mootummoota naannoo Gaafa Afrikaa woliin ta’uunis Al Shabaabiin dhabamsiisuu irratti kan hojjatu ta’uu isiis ifa gooteerti.
Garissaan Naayroobii irraa gara bahaatti km320 fagaattee argamti.
haleellaa yunivarsiitii garriissaa
Previous articleHaleellaa Yunivarsiitii Keeniyaa irra Al Shabaab geesseen 147 du’anii 70 ol madoo ta’an
Next articleEmbaasiin Itoophiyaa Yamanitti argamu humnoota wolworaananiin haleelame